के स’म्भोगपछि ‘दु:खि’ हुन्छन् मानिस ? – Jagaran Nepal
के स’म्भोगपछि ‘दु:खि’ हुन्छन् मानिस ?
एक अर्काबीच प्रेम जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ एक अर्कासँग नीजि पल विताउन। त्यसमा शारी/रिक स’म्बन्ध राख्नु पनि सामान्य नै मानिन्छ । जसले सम्ब’न्धमा थप मिठास ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ । तर एउटा अनुसन्धानले यसलाई ग’लत प्रमाणित गरिदिएको छ ।
अनुसन्धानका अनुसार शारी-रिक स/म्बन्ध राखेपछि पुरुषहरु दु/खी हुन्छन् । महिलामा मात्र होइन पुरुषमा पनि हुन्छ यस्तो सम’स्या- यो अनुसन्धान जर्नल अफ से/क्स र म्यारिटल थेरापीमा प्रकाशित भएको थियो । महिलाहरुजस्तै पुरुष पनि पोस्ट–कोइटल डि-स्फोरियाबाट ग्र’सित हुन्छन् । पीसीडी (पोस्ट–कोइटल डि-स्फोरिया) यस्तो बिरामी हो जुन व्यक्तिको भित्र शारी’रिक स’म्बन्ध बनाएपछि उ’दासी, चि’न्ता, चि’डचि’डाहट र रि’स पैदा हुन थाल्छ ।
अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यस्ता गुनासाहरु महिलामा पाइन्थ्यो । पुरुषहरुमा पनि यस्ता भावनहरु पैदा हुने पहिलो पटक पत्ता लागेको हो । यस अनुसन्धानमा संलग्न जोएल म्याकज्कोविएकले बताएअनुसार रिसर्चको लागि अनलाइन सर्वेक्षणको माध्यमबाट अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, रुस, न्यूजील्याण्ड, जर्मनी र अन्य देशका गरी १२०८ पुरुषलाई सहभागी गराइएको थियो ।
अनुसन्धानको नतिजाअनुसार चालीस प्रतिशत पुरुषले आफ्नो पूरै जीवनमा पी/सीडीको अनुभव गरेको स्वीकार गरे । भने बीस प्रतिशतले चार हप्तामा पोस्ट–कोइटल डि/स्फोरियाको प्रभाव महसुष गरेका थिए ।
यो पनि- गुलाबी ओठ कसरी बनाउने ?
रीना शाक्य सुन्दर, मुलयाम तथा गुलाबी ओठ बनाउन कसलाई मन पर्दैन र ? तर कतिपयका ओठ कालो, हल्का निलो समेत हुने गर्छ । अहिले धेरै ब्यक्ति घरमै फुर्सदमा बसेको अवस्थामा आफ्नो ओठको केही स्याहार गरेमा ओठमा चमक ल्याउन सकिन्छ ।
केहि टिप्स –
लिपबामएसपीएफ २० समावेश भएको लिपबाम र लिपस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । एसपीएफ ३० भन्दा माथिको लिपबाम प्रयोग गर्नु हा’निकारक मानिन्छ । ओठ अत्यन्तै नरम हुने भएकाले यसले धेरै साइड इफे’क्टहरू निम्त्याउन पनि सक्छ ।
मृ’त छाला ह’टाउनेचिनी र महको प्याकले ओठका मृ-त छाला हटाउनका लागि प्रभावकारी मानिन्छ । राती सुत्नुअघि बदामको तेलले ओठमा मुलायम ढंगले मसा-ज गर्दा ओठको ओसलाई कायम राख्न सक्छ । ध्युकुमारीको जेलमा मिसाएर पनि ओठका मृ’त छाला हटाउन सकिन्छ ।
पानी पिउनेपानीको अभावले ओठ पनि कालो हुन सक्छ, त्यसैले दैनिक प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । साथै नरिवलपानी, जुस, सुप तथा खरबुजा जस्ता फलफुलको सेवनले शरिरमा पानीको मात्रा घट्न दिदैन् ।
कागती, आलु र चुकन्दरसुत्नु अघि ओठमा नियमित कागती, आलु र चुकन्दरको रस लगाइ बिहान धुने गर्नुपर्छ । यस किसिमको उपचारले ओठको कालोपन हराएर गुलाबी बन्दै जान्छ ।स्याउको रसपानीमा केहीथोपा स्याउको रस मिलाएर हरेक दिन ओठमा लगाउनाले ओठमा प्राकृतिक रुपमा गु-लाबीपन बढ्नेछ ।
(लेखिका बरिष्ठ सौन्दर्यबिद् हुन्)
प्रस्तुती : लक्ष्मी भण्डारी/नारी म्यागजिन